Wasiirka Amnniga “Waxaa U Xiran Qarixii Soobe Shaqsiyaad wax ka soo Abaabulay, Walina Baaritaankii ayaa socda,” – Hornafrik Media Network
Wasiirka Amnniga “Waxaa U Xiran Qarixii Soobe Shaqsiyaad wax ka soo Abaabulay, Walina Baaritaankii ayaa socda,”
Wasiirka Amniga Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) ayaa sheegay in Qarixii 14-kii bishan ka dhacay Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho loo xiray shaqsiyaad la tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen.
Wasiir Ducaale oo Wariyeyaasha kula hadlayay xalay goobtii qaraxa ka dhacay ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay shacabka la wadaagi doonaan xog ku saabsan qaraxaas.
“Hey’addaha amniga waxay Shacabka Soomaaliyeed dhowaan la wadaageynaa xog ku saabsan qaraxaas iyo dad loo xiray”ayuu yiri Wasiir Ducaale.
Sidoo kale Wasiirka waxaa uu qiray inay wali socdaan baaritaanada ku saabsanqaraxii dadka badan ku dhinteen.
Hey’addaha ammaanka ayaa wajahaya dhaliilo ku aadan qaraxaas iyo gaadiidkii weynaa sida ay ugu suura gashay inuu magaalada soo galo, isla markaana soo dhaafo koontaroolo ciidamada ammaanka ku sugnaayeen.
Hase ahaatee warar ayaa sheegaya in gaariga qaraxa fuliyay markii uu magaalada uu soo galayay uu damiintay nin ka shaqeeya shirkadaha ku yaala magaalada Muqdisho, ninkaas oo iyo rag kale ayaa u xiran falkaas.
Dowladda Soomaaliya oo xalay soo bandhigtay xogta Qaraxa ayaa sheegtay qaraxa guud ahaan inuu waxyeeleeyay 642 qof, dhimashaduna ay tahay 358 qof, halka ay ku dhaawacmeen 228 qof.